कस्तो भाडाँमा खाना पकाउनु स्वास्थ्यका लागि हुन्छ लाभदायक ? | सुदुरपश्चिम खबर
कस्तो भाडाँमा खाना पकाउनु स्वास्थ्यका लागि हुन्छ लाभदायक ?
त्यति मात्र कहाँ हो र ? हामीले प्रयोग गर्ने कति भाँडा त यस्तो हुन्छ जसले पोषक तत्व नष्ट गर्ने मात्र होइन हानिकारक रसायन समेत पैदा गर्छ । त्यस्ता भाँडामा खानेकुरा पकाउँदा हामीलाई अनेक रोग लाग्ने गर्छ ।
यद्यपि तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउँदा विभिन्न रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । राति तामाको भाँडामा राखिएको पानी बिहान खाली पेटमा पिउँदा रक्त शुद्ध गराउँछ । स्मरण शक्ति बढाउँछ । कलेजोसम्बन्धी समस्या हट्छ ।
त्यसो त पानी मात्र होइन, यस्तो भाँडामा भोजन गर्नु पनि लाभदायक मानिन्छ । तामाको भाँडाले खानेकुराको पौष्टिक गुण नष्ट हुन दिँदैन । तर तामाको भाँडामा दूध पिउन भने हुँदैन ।
ननस्टिक भाँडाको सबैभन्दा ठूलो विशेषता के भने यसमा तेलको प्रयोग अत्यान्तै कम गरे पुग्छ । यसमा खानेकुरा डढ्ने वा टाँसिने समस्या हुँदैन । त्यसैले अहिले धेरैको घरमा ननस्टिक भाँडा राख्ने गर्छन् ।
यद्यपि तपाईंलाई थाहा छ यस्तो भाँडावर्तनले स्वास्थ्यमा केही प्रकारका समस्या ल्याउन सक्छ। ननस्टिक भाँडावर्तन धेरै तातो गर्दा यसको सतहमा निस्कने रसायन निकै हानिकारक हुन्छ ।
एल्मुनियमको भाँडावर्तनको प्रयोग लगभग सबैजसो घरमा हुन्छ । एल्मुनियमको प्रेसर कुकुर सबैको घरमा पाइन्छ । तर, एल्मुनियमको प्रेशर कुकरमा खाना पकाउँदा ८७ प्रतिशत पोषक तत्व नष्ट हुन्छ ।एल्मुनियमको भाँडावर्तनमा खाना सेवन गर्नु पनि राम्रो हुँदैन । यसले विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य समस्या निम्त्यान सक्छ ।
गह्रौं र महँगो हुन्छ फलामको भाँडा । यद्यपि खाना पकाउनका लागि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ फलामको भाँडामा। शोधकर्ताका अनुसार फलामको भाँडामा खानेकुरा बनाउँदा उक्त खानेकुरामा फलाम तत्व पनि प्राप्त हुन्छ, जो स्वास्थ्यका लागि आवश्यक हुन्छ ।
प्लास्टिकको भाँडा सहजै पाइन्छ । सस्तो हुन्छ । हेर्दा आकर्षक पनि । तर प्लास्टिकको भाँडामा खानेकुरा खान उपयुक्त हुँदैन। (नयाँ पुस्ता बाट सभार)